Xubna muhiim ah oo looga dilay alshabaab duqeeyn ka dhacday jilib – Somali Sounds
November 29, 2019 November 29, 2019 MogadishuComment(0)
Duqeyn ka dhacday duleedka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay Sarkaal ka tirsanaa amniyaadka Al-Shabaab iyo darawalkiisii, xilli ay ka bexeen degmada Jilib kuna wajahnaayeen deegaan kale oo hoos taga degmadaas.
Duqeeyn lagu dilay xubin muhiim ah oo katirsan alshabaab
Wararka aan ka heleyno gobolka Bay ayaa sheegaya in duqeyn iyo weerar toos ah lagu…
April 26, 2020 April 26, 2020 Somali Sounds.com
Kulan xoogan oo Nairobi ka socdo Maxuu yahay u jeedka shirkaas?
Magaalada Nairobi ayaa dhaq dhaqaaq xoogan laga dareemayaa kadib markii Siyaasiyiin iyo Xildhibaano iyo madaxda Xisbiyada ka dhisan Soomaaliya ee shir ku yeesheen magaalada Nairobi. Siyaasiyiintaan ayaan la ogeyn waxa isku keenay xiligaan oo isku’ ujeedo kadhigay dadka qaar ayaa rumeeysan in eey ku dhawaaqi rabaan is baheeysi eey ku midoobayaan sidii isbaheysiga isbadaldoonka oo […]
Isbadalka Gobalka Banaadir oo weli socda
April 20, 2019 April 20, 2019 Somali Sounds.com
Wariye Caydiid Cabadiraxmaan Aadan ayaa loo Magacaabay Xoghayaha Degmada Xamar Weyne Wareegto ka soo baxdey Duqa Magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ayaa maalmihii ugu Dambeeyay isbadal xoogan ka waday Gobalka Banaadir mar dhaw ayey eheyd kadib markii dib loo magacaabay Gudoomiyihii hore ee Dagmadaas Cabdulqaadir Maxamed Abdulqaadir.